Vono olona tany Toliara :: Zazalahy tsy nisy voamaso hita faty tao am-pianarana • AoRaha
Vono olona tany Toliara Zazalahy tsy nisy voamaso hita faty tao am-pianarana
Nisy zazalahikely, 6 taona, hita faty tao amina efitrano fianarana iray tany amin’ny lisea Antaninarenina, fokontany Besakoa Toliara, omaly maraina. Tsy teo intsony ny voamasony havanana, araka ny fizahana nataon’ny polisy.
Tsy nahitana ratra hafa ny vatany. Eo am-pelan-tanan’ny polisy any Toliara ny fanadihadiana momba ity fahafatesana mampiahiahy ity. “Vita ny fananganan-tsaina, toy ny fanao isaky ny alatsinainy maraina. Nasaina namonjy efitrano fianarany ny mpianatra. Tsy mbola nivoha ny varavaran’ny efitrano iray. Nitazantazana teo amin’ny varavarankely ny mpianatra. Nahita zaza matory tao izy ireo ka niantso haingana anay”, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny lisea Antaninarenina tao amin’ny horonantsary nampitain’ny mpanao gazety iray, any Toliara.
Tonga tany an-toerana nijery ny zava-misy ny mpitandro filaminana sy ny tom-pon’andraikitra eo anivon’ny fokontany.
“Mety ho tany an-toerankafa no namonoana an’io zaza io, no napetraka tao avy eo, ny fatiny. Tsy nisy ra niparitaka na zavatra hafahafa teo akaikin’ny razana”, hoy ny kaomisera Fylla, kaomandin’ny Hery vonjitaitran’ny polisim-pirenena (Fip) any Toliara. Nanontaniana avy hatrany ny ray amandrenin’ilay zaza hita faty. Fantatra fa efa tsy hita sy notadiavina, nanomboka tamin’ny harivan’ny alahady io ankizy io.
“Nisy ankizy nilalao baolina teo ambadiky ny sekoly ka nanaraka tany koa ilay zazalahy, enin-taona. Namonjy fodiana ny ankizy sasany fa izy kosa tsy hita nody an-trano. Nanomboka nitady azy izahay. Nanontaniana ny mpiambina tao amin’ny sekoly nilalaovany saingy nilaza fa tsy misy ankizy intsony ao. Nojerena tany amin’ny fianakaviana rehetra fa tsy nahitambokany”, hoy ny fitantaran’ny fianakavian’ilay zaza namoy ny ainy tao amin’ny horonantsary nampitain’ny mpanao gazety. Nentin’ny polisy sy notazonina halaina am-bavany ilay mpiambina.
Namoy ny ainy, heverina ho vokatry ny fahatairana tamin’io vaovao ratsy io ihany koa ny lehilahy iray anisan’ireo fianakaviana mana-manjo, araka ny fanampim-baovao avy amin’ny polisy any an-toerana
Ahiahina « Coronavirus » :: Sinoa vavikely naterin-dray sy reniny teny amin’ny hopitaly Anosiala
Fiantsoana mpifidy :: Sasa-miandry ny governemanta ny Ceni
Fahavakisana tranombarotra :: Lasan’ny jiolahy ny vola maherin’ny 47 tapitrisa ariary
Pilo kely #4341 aroson’i Mamy Be